Umthandazo wabafileyo (nguSanta Ignatius waseAntiyokwe)
Unqulo & Umoya Imithandazo
by UScott P. Richert
NguSanta Ignatius waseAntiyokwe
Lo Mthandazo wabafileyo (ngezinye izibizo othi Umthandazo weNqwelwe) ngokuqhelekileyo uthathwa ngo-Saint Ignatius waseAntiyokwe. U-Ignatius, umbhishophu wesithathu waseAntiyokwe eSiriya (uStros Petro wayengumbhishophu wokuqala) kunye nomfundi kaStephen u-Evangelist , wabulawa kwiColosseum eRoma ngokusondliwa kwizilwanyana zasendle. Endleleni eya eRoma esuka eSiriya, uSaint Ignatius wafakazela kwiVangeli likaKristu ekushumayeleni, iincwadi eziya kumaKristu (kuquka i-Letter edumile kumaRoma kunye no-Saint Polycarp, umbhishophu waseSmirna kunye nokugqibela kwabafundi bePostile ukuhlangabezana nokufa kwakhe ngokufela ukholo), kunye nokuqulunqwa kwemithandazo, oku kuthiwa yinto enye.
Nangona lo mthandazo ungumnqweno wezabizo emva koko kwaye uchazwe ku-Saint Ignatius, usabonisa ukuba umthandazo ongumKristu ngabafileyo, oku kuthetha ukuba inkolelo yinto eya kuthiwa yayaziwa ngokuba yiPuratory , yinto yokuqala. Lo mthandazo omuhle kakhulu wokuthandaza ngoNovemba , inyanga yeMimoya Engcwele kwiPurgurgatory (kwaye ngokukodwa kwimini yonke Yemihla ngemihla ), okanye nangaliphi na ixesha ukuba uzalise umthwalo wobuKristu wokuthandazela abafileyo.
Umthandazo wabafileyo ngoSanta Ignatius waseAntiyokwe
Fumana ngoxolo noxolo, Nkosi, imiphefumlo yabakhonzi bakho abashiye ubomi obunje beza kuwe. Banike ukuphumla baze babeke kwindawo yokuhlala, ukuhlala kwiindawo ezinobusiso. Banike ubomi obungenakubudala, izinto ezintle ezingayi kudlula, zivuyisa ezingapheliyo, ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
UThixo onesihe Novena
Imithandazo yamaKristu kunye neengqungquthela zeFom yokungenisa
Umthandazo wabazali kubantwana babo
I-Litany yokuncenga kuMama wethu weNtaba iKarmele
Umthandazo kwiSanta Monica kubaMama
Ndiyabulela iivesi zeBhayibhile
Umthandazo weSanta Jerome
De Profundis - INdumiso 130 (okanye 129)
Umthandazo weZizwe eziMxhenxe zoMoya
Umthandazo wamaKatolika wamaMasa
I-Novena ku-Lady of Lourdes
I-Novena kuSt. Anthony Mary Zaccaria
I-Instant Slushy How-To
Ukuguqula amaPascals ukuya kuma-Atmospheres Isibonelo
Iibhola eziphambili ze-Snowboard ze-2014-2015
INdlu Iintlobo, i-Roof Eaves, ne-Eavesdroppers
Indlela yokulungisa i-Vitae yakho yeKharityhulam
Indlela Yokuthetha "Yenkambo" ngesiSpanish
I-Transcendentalism kwiMbali yaseMerika
Iintlobo ezahlukeneyo zeNzala
Iinqununu ezi-5 kunye noqeqesho lwe-10 lwamaHindu
Ukukhangela: Isampula yoLwazi lweSicelo oluqhelekileyo lweNketho # 2
Ukukhutshwa kweNkcazo kunye nokuHlola okuHlangayo kwiiNgxabano
Yintoni i-Tract Zone Trap?
Ukuthatha ukudideka kwi-'Pol 'ne' Para '
Inkcubeko yezobupolitika kunye noBomi boBulungileyo
Ukudumisa okanye i-Flattery? Funda Ukuxelela Ukungafani Neengcaphuno ezili-15
Liyintoni Isibizo Esichazayo?
Ngaba i-Cicadas eyi-17 yonakalisa iMithi yam?
Iindlela zokuFunda ngeeNcwadi zabafundi ngokukhawuleza
IiNkcazo zeeNkcazo zeeNkcazo kunye neNkcazo ezinomdla
Iingcaphi ezibalulekileyo ezivela 'Ngobusuku' nguElie Wiesel
Ukungasebenzi: I-Washington Naval Treaty
IHALL - Yisho igama kunye nomthombo
I-10 Inkoliso Eninzi Yabantu baseLatin eMbali eMbali
Yiyiphi Imimandla Yokudumisa Nokunqula?
AmaNazi kunye nabasetyhini: iKinder, Küche, Kirche
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: Discutere